ရင်သားဓါတ်မှန်နှင့် ရင်သားအာလ်ထရာဆောင်း စစ်ဆေးခြင်း
TH - ไทยAM - AmharicAR - العربيةEN - EnglishKH - CambodiaVN - VietnamZH - 中文(简体)
ပင်မစာမျက်နှာပက်ကေ့တွရင်သားဓါတ်မှန်နှင့် ရင်သားအာလ်ထရာဆောင်း စစ်ဆေးခြင်း
ဘမ်ရွန်ဂရက်ဆေးရုံမှ ဒီဂျစ်တယ်ရင်သားဓါတ်မှန်နှင့် ရင်သားအာလ်ထရာဆောင်း စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် ကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်ကို လက္ခဏာမစခင်သိရှိနိုင်သော ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုရှိပါသည်။
၂။ ဓါတ်မှန်အသုံးပြုရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်မှုနှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်သုံးကုသမှု အမျိုးမျိုးတွင်ပါဝင်သော ရင်သားဓါတ်မှန်၊ ရင်သားအာလ်ထရာဆောင်း
၃။ ဆေးဝါးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများသည် ရင်သားဓါတ်မှန်နှင့် ရင်သားအာလ်ထရာဆောင်းရိုက်ခြင်းတွင် လိုအပ်ပါသည်။
၂။ အခြားကုသမှုများအတွက် ထပ်မံကုန်ကျမည့်ဆရာဝန်ခ
၃။ စစ်ဆေးမှု (Package) တွင်မပါဝင်သော အသုံးစရိတ်များ
၄။ အိမ်ယူပြန်ရမည့် ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ
ဘမ်ရွန်ဂရက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံ (BIH) အဆောက်အဦး၊ ၂ ထပ်၊ ဆေးရုံတိုက်၏တောင်ဘက်ခြမ်း၊
ဖုန်း၊ 1378 (သို့) 02 066 8888
ဒီဂျစ်တယ်ရင်သားဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးရင်သားစစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်၍ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး၊ သာမန်ဓါတ်မှန်သုံး ရင်သားစစ်ဆေးခြင်းထက် ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားသော ပုံရိပ်များရနိုင်ပါသည်။
ရင်သားအာလ်ထရာဆောင်းသည် ရင်သားအတွင်းရှိပုံများကို အသံလိုင်းအသုံးပြုဖန်တီးရိုက်ယူရသော ပုံရိပ်ဖမ်းသောနည်းပညာဖြစ်သည်။ ရင်သားအာလ်ထရာဆောင်းသည် ရင်သားဓါတ်မှန်ဖြင့် တွေ့မြင်ရန်ခက်ခဲသော ရင်သားတဝိုက်ရှိ ပုံရိပ်များကိုဖမ်းယူသည်။
၁. အသက်၄၀နှစ် နှင့် အထက်ရှိသော အမျိုးသမီးများသည် နှစ်စဉ်ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းအတွက် ရင်သားဓါတ်မှန်ရိုက်သင့်ပါသည်။
၂. ကိုယ်ဝန်မရှိသူများ (သို့) ကလေးနို့မတိုက်သော အမျိုးသမီးများ။
၁။မိမိ၏ချိူင်းနေရာနှင့် ရင်သားပေါ်တွင် ကိုယ်နံ့ပျောက်ဆေး၊ ကိုယ်လိမ်းပေါင်ဒါ (သို့) ကိုယ်လိမ်းအလှဆီ (လိုးရှင်း)များကို စစ်ဆေးမည့်နေ့တွင် မလိမ်းပါနှင့်။ ရင်သားဓါတ်မှန်အဖြေအား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။
၂။ အကယ်၍ သင်သည် အခြားနေရာမှ ရင်သားဓါတ်မှန်ရိုက်ခဲ့လျှင်၊ မှတ်တမ်းအဟောင်းအား လက်ရှိစစ်ဆေးရာတွင် ဓါတ်မှန်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ဆီသို့ တပါတည်းယူဆောင်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိစစ်ဆေးမှုတွင် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ဓမ္မတာအပြီး တပတ်တွင် စစ်ဆေးရန်ရက်ချိန်းရယူပါက အကောင်းဆုံးအချိ်န်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဤစစ်ဆေးမှုသည် အပြင်လူနာ (OPD) အတွက်သာဖြစ်သည်။
၂။ ဤစစ်ဆေးမှုသည် ကိုယ်တိုင်ပေးချေသူ (သို့) အာမခံဖြင့်ပေးချေသူအတွက်သာဖြစ်သည်။ (အကယ်၍ အာမခံကုမ္ပဏီမှ ဤစစ်ဆေးမှု၏အခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုလက်ခံလျှင်)
၃။ ဤဈေးနှုန်းတွင် ရင်သားဓါတ်မှန်နှင့် ရင်သားအာလ်ထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း၊ ဓါတ်မှန်ရိုက်ဆရာဝန်ခပါဝင်ပါသည်။
၄။ ဤဈေးနှုန်းတွင် အခြားအပြင်လူနာဝန်ဆောင်မူ၊ အခြားကုသမှုများအတွက် ထပ်မံကုန်ကျမည့်ဆရာဝန်ခ၊ စစ်ဆေးမှု (package)နှင့်မသက်ဆိုင်သော အသုံးစရိတ် များမပါဝင်ပါ။
၅။ ဤစစ်ဆေးမှုသည် မည့်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို ငွေပြန်မအမ်းပါ။
၆။ ၁၃၇၈ သို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ကြိုတင် ရက်ချိန်းယူနိုင်ပါသည်။
၇။ ဤစစ်ဆေးမှုသည် ယခုမှစ၍ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ ၊၂၀၂၀ နှစ် ထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။
Executive ပရိုဂရမ် (အမျိုးသမီး)
ဘမ်ရုမ်ရပ်ဆေးရုံသည် အမျိုးသမီးများအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း - အမျိုးသမီးများအတွက် Executive ပရိုဂရမ် (အမျိုးသမီး) ဆေးစစ်ခြင်းပက်ကေ့ - ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသည်။
Executive Wellness ပရိုဂရမ် (အမျိုးသမီး)
Comprehensive ပရိုဂရမ် - အမျိုးသမီး (၄၀ နှစ်အောက်) ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပက်ကေ့
Comprehensive ပရိုဂရမ် (၄၀ နှစ်အထက်အမျိုးသမီး) ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပက်ကေ့